Inona no format audio tsara indrindra ho an'ny fitaovana portable?
Moa ve mampisy fahasamihafana ny format audio ampiasainao?
Raha manana fitaovana portable izay afaka milalao mozika dizitaly ianao, nanontany tena ve ianao raha misy fehezan-teny manokana tokony hampiasainao?
Raha ny marina, tsy mazava foana hoe iza no format tsara indrindra ho an'ny mozika. Misy sampandraharaha sasany tahaka an'i Amazon mivarotra mozika dizitaly amin'ny format MP3. Raha manolotra hira avy ao amin'ny iTunes Store ao amin'ny format AAC izy ireo.
Avy eo dia misy ny fanontaniana hoe iza no endrika ampiasain'ny fitaovana ampiasainao. Raha vaovao vao haingana, mety ho afaka mameno endrika format malalaka toy ny FLAC ianao, ary koa ireo zokiolona very taloha toy ny MP3 sy ny AAC.
Ary mba hampisafotofotoana bebe kokoa, dia misy koa ny fihainoana fihainoana. Inona no zava-dehibe aminao?
Mba hanampiana anao hanapa-kevitra, dia misy zavatra vitsivitsy azonao atao.
Jereo ny portable & # 39; s format Compatibility
Alohan'ny hanapahana hevitra amin'ny raki-peo, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia manamarina ny toetrany. Ity matetika dia azo jerena ao amin'ny tranonkala mpamorona na ao amin'ny fizarana ofisialy amin'ny torolàlana ampiasain'ny mpampiasa (raha toa ka misy iray).
Ireto misy lahatsoratra roa mety hanampy raha manana iray amin'ireo fitaovana Apple ianao:
Manapaha hevitra momba ny lanjan'ny audio ho anao
Raha tsy mampiasa fitaovana haino aman-jery ambony ianao amin'ny ho avy dia mety ho ampy ny format an-kira hafahafa raha hampiasa ny traikefa tianao fotsiny ianao. Ho an'ny fifanatonana lehibe, ny format malalaka MP3 no safidy tsara indrindra. Algorithm taloha, fa ny iray izay manome vokatra tsara. Raha ny marina, dia izy io no endrika mampihetsi-po indrindra amin'izy rehetra.
Na izany aza, raha toa ianao ka misintona trakitra avy amin'ny mozika CD ohatra, dia mety ho hendry ianao raha hitazona kopia tsy misy vidiny eo amin'ny solosainao / external drive ary miova ho lasa lossy ho an'ny portable ihany koa. Izany dia hitazona ny mozika hoavy amin'ny ho avy, na dia misy aza ny fitaovana sy ny format vaovao amin'ny daty manaraka.
Diniho ny bitrate
Ny bitrate dia zava-dehibe iray tokony hahafantarana indrindra rehefa mikaroka ny mozika tsara indrindra ianao. Na izany aza, ny tanjona bitrate izay tena ilainao dia miankina amin'ny format audio izay ampiasainao.
Ohatra, ny format MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) dia manana 32 to 320 Kbps. Misy ihany koa fomba roa ahafahana mandidy anao - CBR sy VBR. Amin'ity tranga ity, fa tsy kodia mampiasa mampiasa ny CBR ( Constant Bit Rate ) default, dia tsara kokoa ny mampiasa ny kodin'ny VBR (Variable Bit Rate) . Izany dia satria ny VBR dia hanome anao ny kalitao tsara indrindra hananganana tahan'ny tahan'ny.
Ny kodia ampiasainao dia zava-dehibe ihany koa.
Raha mampiasa converter mpampiasa audio izay ampiasaina ny Encoder MP3 Lame ohatra, dia ny 'presbytera voatendry' amin'ny feo avo mahazatra dia ' faran-kafatra ' izay mifanaraka amin'ireto manaraka ireto:
Famantaram-peo Lame: -V0
Bitrate mahasalama: Approx. 245 Kbps.
Ny fampihetseham-peo no ampiasainao?
Tsara kokoa ny misafidy asa fanompoana mozika izay miasa tsara indrindra ho anao sy ny portableo.
Ohatra, raha manana iPhone na solosaina hafa ianao ary ampiasao fotsiny ny iTune Store ho an'ny mozikanao, ny fanarahana ny format AAC dia misy dikany - raha toa ianao ka mijanona ao amin'ny ecosystem Apple. Kitapo fihoaram-pefy izy io, nefa tsara ho an'ny mpihaino mazàna.
Na izany aza, raha manana fitaovana mifehezan'ny fitaovana ianao ary maniry ny fitahirizam-bokin'ny mozikanao miaraka amin'ny zava-drehetra, dia mifidy mozika fampidiram-bokim-peo izay manome ny MP3 dia mety ho safidy tsara kokoa - dia mbola ny de facto standard ihany izany.
Fa, raha toa ka audiophile ianao izay tsy mitady afa-tsy ny tsara indrindra, ary ny portable anao dia afaka mandrindra ny rakitra tsy misy feo, ny fisafidianana ny servisy HD dia tsy misy mpitaingina.
Tranonkala tsy misy ilana azy izay malaza be
Ny boky Bibliotekan'ny Boky Booklet dia manana alibola maimaim-poana ho an'ny jamba
Computer ho an'ny jamba sy ny fahitana fahombiazana
6 Torohevitra momba ny Marketing SMS ho an'ny mpividy finday Newbie
Ireo fandaharana dimy ireo no fitaovana farany indrindra ho an'ny podcasting
Hetsi-panoherana Rage: Fahatsoratry ny Internet mahatsiaro
The Best Apps ho an'ny Tweens
Mitondra ny fitaovanao (BYOD) Famaritana
Ahoana ny fomba hitenenanao hoe 'GIF' amin'ny teny
Azonao atao ve ny mametraka Apps amin'ny iPod nano?
Hafiriana ny fifadian-kanina Internet Modem?
Ahoana ny fomba fanoratana mivantana ny olona Whitelist amin'ny mailaka
"Ny Sims 2 Seasons" Karoka Track - Journalism
Ahoana no fomba filalaovana ny FLAC Files amin'ny Windows Media Player 12
Mamaly avy hatrany ireo hafatra amin'ny Gmail
Fampiasana an-tsoratra ao amin'ny iMovie 10
Ahoana no hanarahana ny olona ao amin'ny Twitter?
Fomba fiarovana ny mombamomba anao manokana amin'ny ordinateran'ny ordinatera
Ahoana no fomba hamahana ny mfc100u.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Ny 8 Best Christmas Albums amin'ny 2018
Inona ny ACSM File?
Ampiasao ny ankabeazan'ny Touchscreen amin'ny Surface na Windows 8.1 Tablet
Understanding Protocol Protocol / Protocol Internet Protocol (TCP / IP)
Ahoana ny famerenana ny fonosana fitondra mozika sns
Ahoana no fomba hanovana ny endri-tsoratra ao amin'ny Outlook.com Messages
Ataovy tsaratsara kokoa ny lahatsary, fa tsy manapaka ny banky!
Mampianara an'i Siri hanonona anaran'olona sy hampiasa mpampiasa anarana
Ny 7 tsara indrindra ho an'ny mpitsikilo mafampana hentitra mba hividy amin'ny 2018
Tutorial: 15 Samsung Galaxy S7, S7 Tips Tips and Tricks
Ny fitetezana ny sakafom-panandramana rehetra an'ny Ogio